आफ्नो श्रीमतीको औंला हेरेरै थाहा पाउनुहोस यस्ता गोप्य कुराहरू ! – Online Khabar 24
आफ्नो श्रीमतीको औंला हेरेरै थाहा पाउनुहोस यस्ता गोप्य कुराहरू !
हुन त कुन युवतीले कति प्रेमी बनाउँछन् त्यो उनिहरुको स्वभावमा भर पर्ने कुरा हो ।
शारीरिक बनावट र देखावटी रुपले होइन ।तर, समुन्दशास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार युवतीको शरीरका अंग अनुसार पनि उनीहरुको प्रेमीको अवस्था थाहा हुन्छ ।यहाँ हामीले समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख गरिएका स्त्रीका केही विशेषताहरु उल्लेख गरका छौं ।
शास्त्र अनुसार जुन युवतीका हात तथा खुट्टाको औंला लामा– लामा हुन्छन् त्यस्ता युवतीहरु धोकेबाज हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो प्रेमीलाई जुनसुकै बेला धोका दिन सक्छन् ।
यस्तै अर्को खबरमा ज्योतिष शास्त्रले मानिसको भूत, वर्तमान र भविष्यको विषयमा फलादेश गर्छ । उसको जन्म समयलाई आधार मानेर जन्मकुण्डली बनाइन्छ । जन्मकुण्डली अनुसार उसको फलादेश गरिन्छ ।
Prevमहिलाहरु कस्ता पुरुषहरुप्रति बढी आकर्षित हुन्छन त ? जान्नुस
nextसं’क्रमणले रोजगारी गुमाएका गरिबलाई १० हजार !